DEG DEG: Xildhibaanad Aamina oo Ikraan Tahliil isku beel yihiin oo hanjabaad soo dirtay daawo - Allbanaadir Media
Home DAAWO DEG DEG: Xildhibaanad Aamina oo Ikraan Tahliil isku beel yihiin oo hanjabaad...
DEG DEG: Xildhibaanad Aamina oo Ikraan Tahliil isku beel yihiin oo hanjabaad soo dirtay daawo
Xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi oo katirsan Baarlamaanka Golaha Shacabka islamarkaana kasoo jeeda Beesha Gaaljecel oo sidoo kale Ikraan Tahliil at kasoo jeedo ayaa si kulul uga hadashay warka kasoo baxay NISA.
Xildhibaanad Aamina Aamina sheegtay in Al shabaab iyo NISA ay isla shaqeeyaan islamarkaana iyaga ay afduubteen markaasna sy dileen.
KII QAATAA QASHAY!
Ugu horreyn, waxaan xanuunka iyo muruga la qeybsanayaa qoyska walaasheen Ikraan Tahliil Faarax oo muddo ka badan labo bilood ay gabadhooda ka maqneyd, dulmi iyo gabdood-fal weyna loogu geystay magaca dowladnimada, illaa maanta lagu hayo tacaddigaas.
Warka ku saabsan geerida Ikraan ee caawa kasoo yeeray taliska Hay’adda Nabadsugidda wuxuu si cad u muujinayaa tuhunkii aan horeyba u qabnay ee ku saabsanaa xiriirka ka dhexeyn kara taliska NISA iyo al-Shabaab.
Wuxuu falkan caddeyn buuxda u yahay sida aysan u jirin cid ammaan ah xitaa haddii ay tahay shaqaalaha dowladda, saraakiisha hay’adaha iyo shacab midna.
Ma jirto cid laga yeelaayo in Ikraan oo ku nooleyd meeshii ugu ammaanka badneyd Muqdisho, hal habeen la waayo, labo bilood kaddibna naloo sheego in la dilay- weliba ay dileen al-Shabaab.
Qof kasta oo caqli saliim leh wuxuu fahmi karaa sababta warka geerida Ikraan loogu soo aadiyay waqtigan, qaabka loo dhigay farriinta iyo Meesha lasoo marsiiyay, iyadoon xitaa qoyska iyo ehelka ay ka dhalatay aysan gacan ku heyn meydkii gabadha!
Ikraan waxay ka dhalatay tol weyn, kaddibna waxay ka dhalatay Soomaali. Xitaa haddii (sida uu taliska NISA sheegtay) ay geeriyootay ma noqon doonto mid la isaga haro. Waa lagu xisaabtami doonaa. Mas’uuliyaddana cidda qaadeysa waa kuwii qaatay ee qariyey ee haddana (siday sheegteen) qashay.
Haddaad qafaalateen oo aad qalateen waa la isaga danbeyn doonnaa insha Allaah!!